Yakakwira Frequency Induction Soldering Copper Pipes kuPBB Bhodhi
Kwayedza -Induction Kutengesa Copper Pipes kuPBB Board
Zvishandiso: DW-UHF-6KW-I Handheld Induction Web
Yedu yekupisa yekudziya solution yakabatsira mutengi kucheka nguva yekugadzira iyo yaimbotora 1 awa kugadzira gumi nematatu emagetsi emhangura yekupisa.
The DW-UHF-6KW-ini ruoko rwakabata kupisa magetsi magetsi pamwe neye chiteshi chekupisa chakabudirira kuita dhizairo mumasekondi gumi nemashanu. Isu takashandisawo imwe yekodhi-yakagadzirwa macheni emagetsi macement kumahombekombe kumahombekombe kuti ive nechokwadi chekuti coil haizokuvadzwa nekushomeka kwemuchina.
Kuti tiite bvunzo, takaisa mapaipi emagetsi emhangura mumapuranga maviri ane tembiricha yakadzika yekupisa. Induction Kutya inova nechokwadi chekudzokorora zvakakwana. Iko kune kuderedzwa kwakakosha munguva yekutenderera uye kuwedzera kwakanyanya kushanda sezvo ikozvino zvikamu zvakawanda zvinogona kutengeswa zvakafanana.
Categories Technologies Tags yakakwirira frequency kutengesa maitiro, induction soldering copper tube, induction soldering machine, induction kutengesa PCB bhodhi, induction kutengesa sisitimu, soldering, soldering mhangura, Kutengesa mapaipi emhangura, kutengesa mhangura kuPCB, kutengesa mhangura kune PCB bhodhi Post navigation